Namathisela i-Drum Utamatisi
I-SUPER SEPTEMBA IZOKHETHA- KAKHULU KAKHULU KANYE NESAPHULELO ESIKHULU
USepthemba umele isizini yokuvuna, isivuno esisha setamatisi sesivuniwe, futhi sesizongenisa ngoSepthemba omkhulu. Sizonikeza izaphulelo ezinkulu kumakhasimende amasha namadala. Uyemukelwa ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane! Ucingo / Whatsapp / Wechat: +86 158 3391 1611
Uyemukelwa Egumbini Lethu Lokuhlala leCanton Fair
Sekuphele isonto kuvulwe i-129th Canton Fair, futhi zonke izinto zethu zimatasa kakhulu ngokusakaza bukhoma. Konke kungukuthengisa okuhle nobuchwepheshe. Ekusakazeni bukhoma, sizokwethula imininingwane yomkhiqizo ngokuningiliziwe. Uma unesikhathi esifushane, ungabukela ukuphindwa kwevidiyo. W ...
2021 Gulfood eDubai
Saya eGoodood 2021, wamukelekile ukusivakashela ngonyaka ozayo! Isikhathi: Feb. 21 - 25, 2021 Ikheli: Dubai World Trade Center, PO Box 9292 Dubai, UAE
Uyini umehluko wokunamathisela utamatisi ne-ketchup?
Utamatisi Namathisela Uma senza utamatisi ochotshoziwe waba ukunambitheka okunamandla kakhulu nokufana okuqinile, leli fomu laziwa ngokuthi unamathisela utamatisi. Singasebenzisa lokhu unamathisela utamatisi ngokuthanda okuhlukahlukene kanye nezindlela zokupheka ezahlukahlukene. Lokhu kunikeza ukunambitheka kwangempela ngamagumbo, isobho, isitshulu, ukosi lwebhodwe njll. Utamatisi Ketchup Isisusa ...
Imisebenzi yokwakha iqembu ye-Hebei Tomato 2019
U-Hebei Tomato wahlehlisa imisebenzi yokwakhiwa kwamaqembu emikhulu kakhulu yonyaka kusukela ngo-Agasti 9 kuya ku-13, 2019. Ukuze unothise isikhathi sokuphumula sabasebenzi, unciphise ingcindezi yomsebenzi, uthuthukise ukuxhumana nokuxhumana phakathi kwabasebenzi, uqinise ukubumbana kwethimba namandla amakhulu, futhi uhlele unfo ...